ကဗျာ « ဧရာဝတီ မိတ်ဆွေများ – The Irrawaddy Friendship
ကဗျာ 0	အစွန်းဆုံးက ရက်စွဲတစ်ခုထဲမှာ (စိမ်းခက်စိုး)
“သင်သည် ဤလောက၏ ဆားဖြစ်၏။” (Mt: 5:13) မြစ်ကွေ့တော့ရောက်ပြီ မှောက်ထားတဲ့ဖဲချပ်လေးဖွင့်ဖတ်တော့ ကိုးန၀င်းနဲ့စီထားတဲ့အသက်ကယ်လှေလေးမှာ “တစ်ယောက်တည်းသာစီးနင်းလိုက်ပါနိုင်တယ်”ဆိုတာလေးရေးထား။
0	ကွယ်လွန်သူနှင်းများ (သစ်ကောင်းအိမ်)
လူ့အဖြစ်ဆုိုတာ တရက်တရက် ကုိုယ်သေတွင်းကုိုယ်နက်အောင် တူးနေရတဲ့ ရက်စွဲတွေပေါ့… ရန်သူကုိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖုို့ကြွေးကြော်ရင်း ရန်သူဖြစ်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကုိုပဲ မနက်လင်းတုိုင်း ဆေးလိပ်မီးခိုးတွေကြား ဟာသ တခုလုို ငါကောက်ရ အဝီစိထိ ဘရိတ်ပေါက်နေတဲ့ ကားတစင်းပေါ်မှာ အဲဒီနေ့က နေသာပုံမကြိုက်လုို့ ပြတင်းပေါက်ပိတ်ထားလုိုက်တာနဲ့ …ဆက်ဖတ်ရန်
0	လူလေးအတွက် တေး (သစ်ကောင်းအိမ်)
နှစ်ချို့ငါးခူကြီးတွေစားရကံကြုံဖုို့ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုခ်ခြေရင်းက ရေကန်ကြီးထဲ သက်စေ့လွှတ်ခံလုိုက်ရတဲ့ငါးတွေလုို မြေခွေးနဲ့ပေါင်းပြီး ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်သလုို ညီညွှတ်ရေးမှာ အချစ်ရေ…. တုို့တတွေလွတ်မြောက်ကြ သစ်ငုတ်ဖြစ်မယ့်အခေါက်မှ ငရဲမှာစုတေမိသူ နတ်သားပမာ အချစ်ရေ… တုို့တွေကုိုးကွယ်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးကျမ်းစာက ဒေဝဒတ်နဲ့ပေါင်းမိလုို့ …ဆက်ဖတ်ရန်
0	စက်တင်ဘာ (တွတ်ပီ)
ပစ္စန္တရာဇ် အရပ်မှာ… အရာရာတိုင်း မိုးမလွတ်လေမလွတ် ဖြစ်ဖူးတဲ့ လ …။ ယမ်းညှော်နံ့ တွေကြား ရွှေဝါရောင်တို့ လှိုက်စားခံရဖူးတဲ့ လ …။ ပွင့်လင်းရာသီကို အန်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း အန်ဖတ်ဆို့ သွားဖူးခဲ့ လ …။
0	“အနာပေါ် တုတ်ကျရင်.. သမိုင်းတွင်အောင် ရက်စက်ပြမယ်” (စိမ်းခက်စိုး)
“အနာပေါ်တုတ်ကျရင်..သမိုင်းတွင်အောင်ရက်စက်ပြမယ်။” အနာပေါ်တုတ်ကျရင် ဆိုကရေးတီးလည်း အဆိပ်ခွက်ကိုရွေးခဲ့ရတယ်။ ဇာဘုရင်မိသားစုလည်း မျိုးဆက်ပါပျောက်ပျက်ခဲ့ရတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ကိုရွှေအမေရိကလဲ ဂျပန်မြို့ကိုအနုမြူဗုံးကျဲချတယ်။ ဘိုလီဗီးယားလည်း ချေဂွေဗားရားကြီးကို သတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ ဗင့်ဆင့်ဗန်ဂိုးလည်း ဂေါ်ကီကိုသတ်ဖို့ လိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခရစ်တော်လည်း ကားစင်ပေါ်တက်ခဲ့ရှာတယ်။ အနာပေါ်တုတ်ကျရင် အင်္ဂုလိမာလရဟန္တာအလောင်းလည်း ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို …ဆက်ဖတ်ရန်
0	ဧရာဝတီ ကြေငြာစာတမ်း
ချစ်ရွှင်သနား တည်ကြားကြမ်းကြုတ် ဆက်ဆုပ်ကြောက်ရွံ့ ရဲဝံ့အံ့ဩ နောအရသာ ကျမ်းခံလာ ရဿ ၉ပါး ခံစားမှုစည်းစိမ် သိုဝှက်လို့ ဣနြေ္ဒ ကြီးမားလွန်းတဲ့ ရာဇဝင်များရဲ့ သူတိုးသမီး သူတိုးရဲ့မိခင် အို ဧရာဝတီ။ လောဘသားကောင် တသိုက် မြစ်ညာမှာ …ဆက်ဖတ်ရန်
ဘယ်အချိန်က စတင်ခဲ့သလဲ မသိပါဘူး အခု… သိတဲ့အချိန်ကပဲ ပြန်လည်စတင်လိုက်ကြပါစို့ ဧရာဝတီ ဒါဟာ အရွေ့ရဲ့ပြယုဂ်တခုလား ရာဇဝင်သမိုင်းရဲ့ မရွေ့ ခေတ်စနစ်ရဲ့အရွေ့ အရွေ့… အရွေ့… အရွေ့… အရွေ့ရှိမှ အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ရူပဗေဒ အရွေ့များလွန်းလို့ အလုပ်မဖြစ်တော့တာ …ဆက်ဖတ်ရန်
0	တိုက်ပွဲခေါ်တဲ့ ဧရာဝတီ (မောင်ငြိမ်းအေး)
ရာဇ၀င်ကို ဖြတ်သန်း ကမ်းမြင် လမ်းမြင် ပန်းတိုင်မြင် သန့်သန့်စင်စင် စီးဆင်းခဲ့တဲ့မြစ်။ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးတွေကို သွေးနဲ့ ကမ္ဗည်းတင် သမိုင်းတွင်စေခဲ့တဲ့မြစ်။ နိုင်ငံဂုဏ်နဲ့ လူမျိုးဂုဏ်ကို အဟုန်ပြင်းပြင်း၊ သူ့ချစ်ခြင်းနဲ့ အဆင်းလှလှ၊ သင်းမြမြ ၀င်းပတောက်ပြောင်စေခဲ့တဲ့မြစ်။ စပါးဆန်ရေ၊ ပေါများစေဖို့ …ဆက်ဖတ်ရန်
0	မြစ်ကော (မောင်စိန်ဝင်း-ပုတီးကုန်း)
မြစ်မကောအောင်လို့သစ်တောတို့ စိမ်းရပေမည် … ရေဝေတောတွေ ဆိုင်းစို့ စို့မှိုင်းညို့ ညို့ မှုန်ရီရီ … ချင်းတွင်းနဲ့ ဧရာဝတီ ရေပြာကြည်သမျှ မြန်မာ့သွေးဟေ့ … တတောလုံးပြောင် တတောင်လုံးလင်း
0	“ ဧရာဝတီ သင်သိပါလေစ ” (ကိုဖြောင့်)
ဧရာဝတီ သင့်ရဲ့ကျောမှာ အနာတရတွေများခဲ့တယ် ရာဇ၀င်များထဲက မင်းရှင်ဘုရင်မှအစ ပြည်သူတို့ရဲ့သွေး နယ်ချဲ့သူတို့ရဲ့သွေး ဖက်ဆစ်တို့ရဲ့သွေး အပြစ်မဲ့သူတို့ရဲ့သွေး သွေးတွေနဲ့ပြည့်လျှံခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရှင်သန်နေဆဲ စီးဆင်းစဲပါ၊ ဧရာဝတီ သင်ဟာ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့မိခင်မြတ် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တယ် သင့်ရင်ထဲမှာရှိသမျှကို အန်ထုတ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ် သင့်ကိုယ်ပေါ်မှာပြုသမျှကို …ဆက်ဖတ်ရန်
ဝင်ရန်	Log in
collections of online pokies. online casino Get acquainted with the basics of slot machine technology for machines with Here you find information about the slot machine and if you can play it	australian online casinos spela kasino gratis casino spela casino online kasino canadian online casinos. Tycoon is the closest you can get to Las Vegas slots online, on iOS - Android. Online casino 21 Jul 2011.	Spin and Win Slot Machines For Amazing Prizes or Free Slots For casino pokie online casino slots Get $£€5absolutely free, Geta100% Welcome
Find out why Ukash is the best way to enjoy All Slots casino pokies and why this Online casino AC-E is committed to servicing connector and associated interconnect